Kitra ao Antsirabe : hamerina ny lazan’i Vakinankaratra i Fidy | NewsMada
Kitra ao Antsirabe : hamerina ny lazan’i Vakinankaratra i Fidy
Anisan’ireo ligim-paritra nanavao ny filohan’ny baolina kitra ao aminy Antsirabe. Lany hitantana izany, Andriantoponera Fidinirina. Ny hamerina ny lazan’ity taranja ity, amin’ny toerana fahiny, ny tanjon’ny filoha vaovao.
Mpitantana vaovao, amin’ny alalan’Andriantoponera Fidinirina, no hitondra ny ligin’ny baolina kitra ao Vakinankaratra, manomboka izao. Voafidy ny zoma 15 desambra lasa teo izy. Raha tsiahivina, kandidà 5 ireo nifaninana, tamin’ity. Nahazo vato 5 tamin’ireo seksiona 7 nandatsa-bato izy.
Tsy olona vaovao amin’ny baolina kitra i Fidy satria efa filohan’ny klioba FC Vakinankaratra, izay inefatra nandrombaka ny tompondakan’izany faritra izany, ary efa indroa nahazo ny amboaran’ny RN5. Taorian’ny fahalaniany ho filohan’ny ligy anefa, voatery nametra-pialana tamin’izany toerana izany izy. Talohan’io, efa mpilalao baolina kitra, tao amin’ny Zatovon’i Bongolava, ny taona 1989 – 1991 sy tao amin’ny ekipan’ny ESS Lettres Ankatso, ny taona 1994 – 1996 izy. Nitana ny toeran’ny irakiraka havanana i Fidy tamin’izany.
Maro ireo fandaharanasany, amin’izao taom-piasana hitondrany ny ligin’i Vakinankaratra izao. Laharam-pahamehany ny famerenana indray ny lazan’ny kitra ao Antsirabe sy ny fampakarana ny lentan’ny fifaninanana. Ankoatra izay, haverina ny fiaraha-miasa amin’ny mpitondra ao an-toerana sy ireo orinasa, hirotsaka hanohana amin’ny fampandrosoana ny kitra ao Antsirabe, toy ny tamin’ny fotoan’ny Sraf, BTM, Cotona, Taxi, 3FB.
Omena sehatra ny seksiona
Hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ireo seksiona 7 mandrafitra ny ligy ka homena sehatra ny fifaninanana ho an’ireo tanora sy ny vehivavy. Hampitomboina ny isan’ny klioba mifaninana ao amin’ny sokajy D1. Ezahiny ny hisian’ny mpilalao betsaka avy ao Antsirabe, handrafitra ny Barea de Madagascar, toy ny tamin’ny andron-dry Mamisoa sy ry Damany kely. Hanangana birao iasan’ny ligy koa ny tenany, fa tsy ho any an-tranon’ny filoha na ny sekretera jeneraly. Asina “site web”, hahalalana ireo vaovao rehetra mahakasika ny kitra ao Antsirabe. Hiara-kiasa amin’izay ho filohan’ny federasiona ny ligin’i Vakinankaratra ka hangataka ny hametrahana bozaka “synthètique” ao an-toerana. Fantatra ihany koa fa hamboarina manomboka ny faran’ity taona 2017 ity, ny bozaka ao amin’ny kianja Vélodrome. Tsy hadinon’i Fidy ny hanome fiofanana ireo mpilalao fahiny sy ireo teknisianina, izay fototra mampandroso ny baolina kitra.
Hatreto, mbola miandry ny famindram-pahefana, amin’ny filoha teo aloha ny tenany vao hanendry ireo mpiara-miasa aminy ary hanomboka ny tetikasany.